Soomaaliya, 01 July 2019
Maalinta kowda Luulyo oo laga xusay Soomaaliya
Racfaanka Raggii Dilay Caasha Ilyaas oo la Diiday
Maxkamadda racfaanka Gobalka Nugaal ayaa diidday racfaanka ay qaateen seddex dhalinyaro ah oo bishii hore lagu helay inay kufsi wadareed iyo dil u gaysteen gabadh 12 sano jir ah oo lagu magacaabi jiray Caasho Ilyees Aadan magaalada Gaalakacayo, falkaas oo dhacay bishii bishii Febrayao ee sannadkan
Bannaanbaxyo Mar Kale ka Socda Sudan
Ciidamada booliska ayaa u adeegsaday suntan dadka ka ilmeysiisa kumannaan qof oo maanta isugu soo ururay magaalada Khartoum si ay uga qeybgalaan bannaanbax ka dhan ah jeneraallada militariga ee awoodda ku qabsaday dalka Sudan.
Maxamed Qanyare Afrax oo Geeriyooday
Allah u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho saakay ku geeriyooday Maxamed Qanyare Afrax oo ka tirsanaa hogaamiyeyaashii siyaasadda ee Soomaaliya.
Madasha Dhalinyarada: Xaaladda Waxbarasho ee Degmada Jawiil
Waxa jiro dhalinyaro fara badan oo inta ay wax barashada aas'aasiga ah ku qaataan deegaannadooda, balse midda sare u raadsada gobollada kale ee dalka ama dibadaha.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxaa todobaadkan isla soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandurey iyo Nur Xasan Nur.
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha, waxaa soo jeedinaya Jamal Axmed Cusman.
Barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka waxaan uga hadli doonnaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada cusub ee Maamul Goboleedka Galmudug.